လှထိတ်ခေါင် – Grab Love Story
Typed by Lynnsett (အချစ်တက္ကသိုလ်)
ဒေါ်လွင်မာထက်ဆိုသည်မှာ ‘ထက်’ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီး၏ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။ သူမသည်ကိုယ်တိုင်က အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်ပသို့လည်း အကြိမ်ကြိမ်သွားရောက်၍ သင်တန်းအမျိုးမျိုး တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
သူမသည် လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် စေ့စပ်သေချာသည်။တိကျ ပြတ်သားသည်။စေတနာ ကောင်းသည်။လုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်လျှင် မည်သူ့ကိုမှ အားမနာတတ်။တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ လွင်မာထက်၏ လက်ထက်ကျမှ ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများသည် အံသြဖွယ်
အောင်မြင်၍လာရပြန်တော့ လွင်မာထက်၏ဂုဏ်သတင်းက စီးပွားရေး လောကတွင် သတင်းကြီးခဲ့သည်။ ထိုဂုဏ်သတင်းတို့တွင် လွင်မာထက်၏ဆောင်ရွက်မှု အောင်မြင်မှု၊
အရည်အချင်းရှိမှုတွေသာမက သူမ၏အလှဂုဏ် သတင်းကလည်း ကြီးမားလှသည်။ အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ် လွင်မာထက်သည် ငယ်စဉ်ကလို နုနယ်လှပမှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပြည့်စုံသော အလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း ကလဲရှိ ဓနဥစ္စာကလဲ ပြည့်စုံလှရက်လွန်းသူ တစ်ယောက်ကလဲဖြစ်နေပြန်တော့ လွင်မာထက်ကို တမ်းတမက်မောသူများ လက်တွဲလိုသူများ ကမ်းလှမ်းသူများဖြင့် ဝိုင်းဝိုင်းလည်၍နေရသည်။
လွင်မာထက်တွင် ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသား ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်တွေ က မရှိတာတော့ မဟုတ်ပါ။သို့ရာတွင် သူမ ဘဝတက်လမ်းအတွက် ကြိုးစားခဲ့ရခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများကြောင့် သိုသိပ်စွာ နေခဲ့ရခြင်းတို့ကြောင့် အရွယ်ရောက်သူ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူတိုင်း ခံစားရမြဲဓမ္မတာဖြစ်လေသော သွေးသား ဆန္ဒများကိုပင် မျိုသိပ်၍ ချိုးနှိမ်ကာ ထားခဲ့ရလေသည်။
မျိုးဝင်းပိုင်တစ်ယောက် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်မှာ တစ်လကျော်ကျော်မျှပင်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကာလအတောအတွင်း မျိုးဝင်းပိုင်သည် သူ၏အလုပ်တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။ လွင်မာထက်က မျိုးဝင်းပိုင်ကို သူမ၏ရုံးခန်းထဲသို့ခေါ်ကာ မကြာခဏ အလုပ်ခိုင်းစေ တတ်သည်။ထို့ပြင် မျိုးဝင်းပိုင်ကို လွင်မာထက်သည် သူမ၏ရုံးခန်းထဲသို့ ခေါ်၍ အလုပ်များလုပ်စေခဲ့ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်များပြီးလျှင် သူမသည် မျိုးဝင်းပိုင်ကို အအေး၊ကော်ဖီ၊မုန့် စသည်တို့ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးလျှက် စကားစမြည် ပြောတတ်သေးသည်။
ထိုအခါမျိုးတွင် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ် အိနြေ္ဒရှိလွန်းသော ဒေါ်လွင်မာထက်၏
ဟန်ပန်မျိုးမဟုတ်တော့။မျိုးဝင်းပိုင်၏ ရင်းနှီးခင်မင်လွန်းစွာဖြင့် ရှိနေသော ငယ်သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ဦးပမာ အသွင်မျိုးကို ဆောင်ကာ ရယ်ရယ်မောမော နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ဖြင့် လွင်မာထက် တစ်ယောက် ရှိနေတတ်လေသည်။
ထိုသို့သော အခါမျိုးတွင် ခေါ်ဝေါ်သုံးနုံးသော အခေါ်အဝေါ်လေး တွေကလဲ တမျိုးလေး ပြောင်းသွား၏။မျိုးဝင်းပိုင်ကို လွင်မာထက်က “မောင်လေး” ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းသည်။မျိုးဝင်းပိုင်ကတော့ စ၍အလုပ်မဝင်မှီ အင်တာဗျူးဖြေကထဲက “မမ” ဟုသာ သုံးစွဲခဲ့ရာမှ ယခုတော့ “မမထက်” ဟုပင် တရင်းတနှီးခေါ်ဝေါ်၍နေချေပြီ ဖြစ်သည်။
နှစ်ဦးတည်းရှိနေသော အခါမျိုးတွင် ပေါ့ပါး လတ်ဆတ်၍နေသော “မမထက်”၏
မျက်နှာလှလှလေးကို မျိုးဝင်းပိုင်သည် တိတ်တခိုးငေးကြည့်မိတတ်သည်။ ကြည့်ဖန်များလာတော့ မျိုးဝင်းပိုင်သည် ခပ်ရဲရဲပင် ငေး၍ကြည့်တတ်လာသည်။ ဒီလိုဖြစ်အောင်ပင် လွင်မာထက်က ဖန်တီးပေးနေတာလား မသိ။
မျက်နှာလေးနှင့်အပြုံးလှလှလေးတင်သာမက မမထက်၏အချိုးကျနစွာဖြင့် ရှိနေသော လှပလွန်းသည့် ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ငေး၍ကြည့်တတ်သည်။သူရှိရာဖက်သို့ တခါတရံ မျိုးတွင်
ကျောခိုင်းကာသွားလာလှုပ်ရှားနေသော မမထက်၏ တပွေ့တပိုက်ကြီးဖြစ်ကာ အိထွေးတုံခါလျှက်ရှိသော ဖင်သားကြီးများကိုလည်း မျိုးဝင်းပိုင် တစ်ယောက် မျက်တောင်မခတ်ကြည့်ကာ ရမ္မက်များ ထန်ခဲ့ရသည်မှာလည်း ကြိမ်ဖန်မနည်းတော့ပေ။
မျိုးဝင်းပိုင် တစ်ယောက် မမထက်ကို စိတ်ကူး၍သာယာ တတ်လာသည်။မမထက်ကို စွဲလန်းတမ်းတရင်း စိတ်ကူးယဉ်ကာ သာယာနေခဲ့ရသော အကြိမ်များလည်း တဖြေးဖြေးများ၍လာခဲ့ရသည်။ အချိန်ကာလ တဖြေးဖြေး ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မျိုးဝင်းပိုင်သည် မမထက်ကို
စွဲလန်းသထက် စွဲလန်းတမ်းတကာ ရင်မောစွာဖြင့် ချစ်ခဲ့မိပေပြီ။
မမထက်သည်လည်း မျိုးဝင်းပိုင်ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံလာကာ မျိုးဝင်းပိုင်၏ အနီးသို့ သူမသည် တဖြေးဖြေး နီးကပ်စွာဖြင့် ရောက်၍လာခဲ့ရပေသည်။
လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်၏မျက်နှာလေးကိုဂရုတစိုက်ကြည့်လိုက်မိ သော အချိန်ကစ၍ သူ၏နုငယ်သောမျက်နှာလေးသည် သူမ၏ရင်ဝယ်ငြိတွယ်ခဲ့ရလေ သည်။မျိုးဝင်းပိုင်၏ ပြောဟန် ဆိုဟန် လှုပ်ရှားဟန်လေးများကို တွေ့ဖန်များလာတော့ လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်ကို ခင်တွယ်လာခဲ့ရသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရင်းနှီး၍လာခဲ့ ရပြန်တော့ မျိုးဝင်းပိုင်၏အပြုံးလေး မျိုးဝင်းပိုင်၏စကားသံလေးတို့ကို လွင်မာထက်က စွဲလန်း၍လာခဲ့ရသည်။သူမသည် ဘယ်နေရာဘဲရောက်ရောက် ဘာဘဲလုပ်နေ လုပ်နေ မျိုးဝင်းပိုင်၏ပုံရိပ်က လွင်မာထက်၏အတွေးအာရုံထဲတွင် သွားလာလှုပ်ရှားနေခဲ့ရသည်။
လွင်မာထက်၏ရင်တွင်းမှ တစ်ခုတည်းသောနှလုံးသည်းပွတ်သည် ရှင်သန်လာခဲ့ရပြီး နွေးထွေးသော ရင်လှိုင်း ဂယက်လေးများနှင့်အတူ အချစ်များစွာ တို့ကိုပေါက်ပွားကာ သူမ၏အသွေးအသားများထဲသို့ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့စေခဲ့ရပြီဖြစ်၏။
“မမထက်” သည် မောင်လေးကို အချစ်များစွာဖြင့် စွဲလန်းမြတ်နိုးစွာ ချစ်ခဲ့ရလေပြီ ဖြစ်တော့၏။
ချစ်သောသူနှင့် ဆုံတွေ့နေရသော အချိန်လေးအတွင်းဝယ် လွင်မာထက်၏ ရင်ဝယ် အေးချမ်းကြည်နူးစွာ ခံစားနေရသည်။ထို့ပြင် ချစ်သူအပါးတွင် ရှိနေစဉ်အခါတွင် သူမသည် နုငယ်ကာ ဆယ်ကျော်သက်လေးသဖွယ် ဖြစ်သွားရပြီး လန်းဆန်းပေါ့ပါး၍ နေခဲ့ရသည်။
မမထက်သည်ချစ်သူအပါး၌ ရှိနေချိန်ကာလလေးကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကြုံတွေ့ချင်လာသည်။ ထိုအချိန်လေးကိုလည်း ကာလကြာရှည်စွာ ရှိစေချင်လာသည်။ အတူနေရရင်ဟူသော စိတ်ကူးလေးတွေက လွင်မာထက်၏ရင်ဝယ်မကြာခဏ ဆိုသလို ပေါ်ပေါက်၍ခံစားနေရသည်။
“မောင်လေး”ကလဲ သူမအပေါ် စိတ်ဝင်တစားရှိလာသည်ကို မမထက်သည်
မိန်းမသားပီပီနှင့်နေခဲ့သည်။ထိုသို့ စတင်၍ သိလိုက်ရသောအချိန်တွင် သူမခံစားလိုက်ရ သော ကြည်နူးမှုမျိုးသည် လွင်မာထက်အဖို့ ဒီတသက် ဒီတခါသာ ခံစားရဖူးသည် ဖြစ်သည်။ သူမကို စိတ်ဝင်တစားရှိနေသူ သူမချစ်မိသူတစ်ယောက်က ချစ်တဲ့အကြောင်း တွေကို ဖွင့်ဟလာစေကြောင်း တိတ်တခိုးဆုတောင်းနေမိခဲ့သည်။
ချစ်မိသူမှ ဖွင့်ဟလာနိုင်စေရန်လည်း လွင်မာထက်သည် လမ်းကြောင်းပေး ခဲ့သည်။ဒါ့အပြင် အမူအရာများဖြင့်လည်း လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ဒီလိုလမ်းကြောင်းပေးခဲ့ ရသော အကြိမ်တို့သည်လည်း မရေတွက်နိုင်တော့ပေ။ကြိမ်ဖန်များစွာပင် ဖြစ်သည်။
တစ်ယောက်နှင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟူသော တံတိုင်းသည် ကြီးမားထူထဲလွန်းလှသည်။ ချစ်မိသောသူမှ သူမဆီသို့ ထိုတံတိုင်းအား ကျော်လွန်အောင် ထိုးဖေါက်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပေ.
အင်အားကြီးမားသော သူမကသာ ထိုတံတိုင်းကို ချိုးဖျက်၍ချစ်သူအတွက်
လမ်းခင်းရမည်သာဖြစ်သည်။သူမတို့နှစ်ယောက်ကို ပိုင်းခြားထားသော ကြီးမားထူထဲ လွန်းသည့် ထိုတံတိုင်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ရန် အင်အားတွေသူမတွင်ရှိနိုင်ပါ့မလားဟူသော အတွေးတွေက အချစ်ကိုတမ်းတနေရသော လွင်မာထက်၏ ရင်ကို ခိုဝင်၍ လာခဲ့ရပါတော့သည်။
ရုံးသွားရန်အတွက်ထွက်လာခဲ့သော လွင်မာထက်သည် ဧည့်ခန်းထဲသို့ အရောက်မှာပင် မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သိန်းလွင်က လှမ်း၍ခေါ်လိုက်သဖြင့် မိခင်၏အနားသို့ ရောက်၍သွားရသည်။ပြီးတော့ မိခင်ဖြစ်သူ၏ရှေ့ရှိဆိုဖါပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်သည်။
“….တခြားမဟုတ်ပါဘူး…သမီးရယ်….မေမေ…တရားစခန်း တစ်လဝင်ဖို့အတွက် ကိစ္စပါ……” “….ဝင်လေ မေမေရာ၊ အိမ်မှာလည်း မသိန်းနုတို့ လင်မယားရှိနေတာဘဲ..”
“…ဒါတော့ ဒါပေါ့သမီးရယ် မေမေကလဲ သမီးကို စိတ်မချဘူး အဲဒါ သမီးဒေါ်လေး ခင်ခင်မိကို အိမ်မှာ ခေါ်ထားမလားလို့….”
မိခင်ဖြစ်သူ၏စကားကို ကြားလိုက်ရသော လွင်မာထက်တစ်ယောက် စဉ်းစားရ ကြပ်၍ သွားရသည်။ သူမ၏ဒေါ်လေး ခင်ခင်မိဆိုတာက မိခင်ဖြစ်သူ၏ ညီမအငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။အသက်က (၃၃)နှစ်မျှသာ ရှိသေးပြီး ယောကျာ်းက (၃)ယောက်ပင် ရဘူးခဲ့သူဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်လဲ
လွင်မာထက်၏ဖိုးဖွားများရှိစဉ်ကထဲက အမွေပြတ် ကြော်ငြာထားတာဖြစ်ပြီး ဘိုးဘွားများ မရှိတော့မှ
မိခင်ဖြစ်သူက ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့ ပြီး ပြန်၍ အဆက်အသွယ်ရနေခြင်းဖြစ်သည်။ “…..တစ်လလောက်ပဲ သမီးရယ်…နောက်ပြီး သူ့ယောကျာ်းကိုခေါ်မလာဖို့ မေမေဘဲ ပြောပါ့မယ်….ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား သမီး….ဟင်…”
မတတ်နိုင်တော့ပါ။မိခင်ဖြစ်သူ စိတ်ချမ်းသာစေရန်နှင့် တရားစခန်းဝင်မည့်
မိခင်ဖြစ်သူနောက်ဆံမတင်းရန်အတွက် လွင်မာထက်သည် တလထဲဘဲဟူ၍ စိတ်ကိုလျှော့ကာ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရလေတော့သည်။
“….သူတယောက်ထဲ လာနေမယ်ဆိုရင်တော့ မေမေသဘောပါဘဲ။ဒေါ်လေးကို ခေါ်ထားခဲ့ပေါ့ အော်… မေမေက ဘယ်တော့လောက် တရားစခန်းဝင်မှာလဲ…”
“……သဘက်ခါလောက် စပြီးဝင်မယ် သမီး….ကဲကဲ… သမီးလဲ ရုံးနောက်ကျနေအုံးမယ် ……..သွားရင်လဲ…. သွားတော့ကွယ်….”
ဟူ၍ ပြောလိုက်ရင်းကပင် ထိုင်ရာမှ အသာထကာ လွင်မာထက်သည် ထွက်၍ လာခဲ့ပါတော့သည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ဒီနေ့ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော်လည်း လွင်မာထက်မှာထား၍ မျိုးဝင်းပိုင်သည် လွင်မာထက်၏ အိမ်သို့ နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် ရောက်၍လာခဲ့ရသည်။
မျိုးဝင်းပိုင်တစ်ယောက် ရောက်၍လာသည်ဆိုသည်နှင့်အသင့်ပင် စောင့်၍နေသာ
လွင်မာထက်က မျိုးဝင်းပိုင်ကို ကားမောင်းခိုင်းကာ ထွက်လာခဲ့ကြတော့၏။
အမြဲတမ်းပင် ခပ်ရိုးရိုးသာဝတ်တတ်သော လွင်မာထက်တစ်ယောက် တစ်ခါမှ
သူမဝတ်စားထားတာ မတွေ့ဖူးသော အဝတ်အစာမျိုးကို ဝတ်လျှက် လှချင်တိုင်းလှ၍နေရသော လွင်မာထက်ကို မျိုးဝင်းပိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရလေသည်။ လွင်မာထက်သည်ခြေသလုံးလေး နောက်ဖက်တွင်ခွဲထားသော အခွဲလေးပါသည့် စကပ်အနက်ရောင်လေးကို ဝတ်ထားပြီး သူမ၏ခန္ဓာကိုယ် အပေါ်ပိုင်းတွင်တော့ ငုဝါရောင် လက်ပြတ် ရင်စေ့ ခါးတင် အင်္ကျီလေးကို ဝတ်၍ထားလေးသည်။
ပြီးတော့ လွင်မာထက်သည် သူမ၏ကျောလယ်သာသာ ဆံပင်လေးကို နောက်စေ့တွင် ခပ်မြင့်မြင့်လေးစု၍ မြင်းမြီးပုံစံလေးချထားသည်။သူမ၏မျက်နှာလေးမှာ တော့
မိတ်ကပ်ပါးပါးလေးလိမ်းထားကာ နှုတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာကိုတော့ နီနီရဲရဲလေး ဆိုး၍ထားလေသည်။ တစ်ခါဖူးမျှ သူများမောင်းသည့် ကားကိုရှေ့ခန်းတွင် မလိုက်ခဲ့ဖူးသည့် လွင်မာထက်သည် ယခု မျိုးဝင်းပိုင် မောင်းသောကားကို မျိုးဝင်းပိုင်နှင့် ယှဉ်ကာ ကားရှေ့ခန်းတွင် ထိုင်၍ လိုက်ပါခဲ့လေသည်။ သူမဆီမှပျံ့လွင့်၍လာသော သင်းပျံ့သည့် ရနံ့များသည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ရင်ကို
ရိုက်ပုတ်လှုံ့ဆော်လျှက်ရှိလေသည်။သူတို့နှစ်ဦးကို သယ်ဆောင်၍ လာသောကားလေး သည် အမြန်နှုန်းမှန်မှန်ဖြင့် မောင်း၍လာခဲ့ရာတွင် နာရီဝက်ခန့်ကြာသောအခါ၌ လွင်မာထက် ညွှန်ပြသည့် ခြံဝန်းတစ်ခုထဲသို့ အသင့်ဖွင့်၍ထားသော ခြံတခါးမှ တဆင့် ဝင်လိုက်သည်။
ကားလေးသည်ခြံဝန်းထဲသို့ရောက်လျှင်ပင် မျိုးဝင်းပိုင်ကလွင်မာထက်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ခြံတံခါးကိုပိတ်ကာ အတွင်းမှ မင်းတုံးထိုးလိုက်ရသည်။ပြီးတော့ ကားပေါ်တက်၍ ကားလေးကို ခြံဝန်းကျယ်ကြီးအတွင်း မလှမ်းမကမ်းလေးတွင်ရှိနေ သော တစ်ထပ်တိုက်လေးဆီသို့ မောင်း၍လာခဲ့သည်။
တိုက်ကလေးရှေ့သို့ရောက်လျှင် ကားလေးထိုးရပ်လိုက်သည် ဆိုသည်နှင့် လွင်မာထက်က ကားပေါ်မှဆင်းကာ တိုက်ကလေး၏တံခါးကိုသွား၍ ဖွင့်နေသည်။မျိုးဝင်းပိုင်ကတော့ ကားနောက်ခန်းထဲမှ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူနေရင်း သူ၏အကြည့်များက နောက်ကျောပေးထားသော လွင်မာထက်၏ဆီသို့ ရောက်၍ နေသည်။သေးကျင်သော လွင်မာထက်၏ခါးလေးအောက်မှ ဖင်သားစိုင်ကြီးများသည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ရင်ကို လှိုက်ဖို၍လာစေခဲ့သည်။
တိုက်ထဲရောက်သည်နှင့်လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်၏လက်ထဲမှ ပစ္စည်းများကိုယူ၍ ဆက်တီစားပွဲပေါ်တွင်စီကာ စဉ်ကာ ချ၍နေသည်။သူမရပ်၍ ပြင်ဆင်နေသည်က မျိုးဝင်းပိုင် ထိုင်နေရာနှင့်စားပွဲလေးအကြားတွင် ဖြစ်နေရာ လွင်မာထက်၏ကားစွင့်မို့မောက်လျှက်ရှိသော ဖင်သားကြီးများမှာ မျိုးဝင်းပိုင်၏မျက်နှာ ရှေ့နားတွင် ကပ်လျှက်တွေ့မြင်နေရ၍ သူ၏ပုဆိုးတွင်းမှ လီးတန်ကြီးသည် မာတောင်၍ လာရတော့သည်။
ပြီးတော့ လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ဘေးတွင်ကပ်လျှက်သား ထိုင်ချလိုက်သောအခါ အိထွေးလှသော သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးသည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ ကိုယ်လုံးလေးနှင့်ထိထိမိမိ ဖိကပ်မိတော့သည်။ ထို့နောက် လွင်မာထက်၏ကိုယ်လုံးလေးသည် လူးလွန့်ကာ မျိုးဝင်းပိုင်၏ကိုယ်လုံးဖက်သို့ ပို၍ဖိကာတိုးလိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ငိုက်လျှက်
လွင်မာထက်က မျိုးဝင်းပိုင်ကို မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကာ ကြည့်လိုက်သည်။
သူတို့နှစ်ယောက် ရှေ့ရှိ စားပွဲလေးပေါ်တွင်တော့ စားစရာတွေမှာ အပြည့်ပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်ကြပြီးနောက် စကားဆုံးသွားသော်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်၏ ဆုံတွေ့နေ သော မျက်လုံးလေးများကို မရုတ်သိမ်းဘဲ ခပ်ရဲရဲပင် မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကာ ကြည့်နေကြသည်။သူတို့နှစ်ယောက်၏ မျက်နှာမှာ တထွာခန့်သာ ကွာဝေးတော့သည်။
ပြီးတော့ သူမဆီမှ လှပလွန်းသော အပြုံးလေးတစ်ချက် ပျံ့လွင့်သွားချိန်တွင်တော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သော မျိုးဝင်းပိုင်သည် လွင်မာထက်၏ကိုယ်လုံးလေးကို သိုင်း၍ဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏မျက်နှာလှလှလေးကို အငမ်းမရပင် နမ်းပါလေတော့သည်။လွင်မာထက်ကတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးကို အလိုက်သင့်လေး မော့ကာ ပြုံးပြုံးလေး လုပ်ပေးထားလေသည်။ ခဏအတွင်းမှာပင် မျိုးဝင်းပိုင်၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက သူမ၏ ဖူးဖူးလေးကြွနေသော နီနီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းလေးများဆီသို့ ဖိကပ်လိုက်သည်နှင့်ပင် လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်၏နှုတ်ခမ်းများကို အရင်ဦးအောင် စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး သည့်ခဏမှာပင် သူမ၏လျှာဖျားလေးက မျိုးဝင်းပိုင်၏နှုတ်ခမ်းလေးများကို ပွတ်သပ်၍ ပေးနေတော့သည်။
ထို့ပြင် လွင်မာထက်၏လက်နှစ်ဖက်အနက် တစ်ဖက်က မျိုးဝင်းပိုင်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဖက်လိုက်ပြီးကျန်တစ်ဖက်က သူ၏ခါးကိုဖက်လိုက်သည်။ဘေးတိုက် ထိုင်လျှက်သားဖြစ်သည့်အပြင် လွင်မာထက်မှာ မျိုးဝင်းပိုင်၏ရင်ခွင်ထဲသို့ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေး တစ်ခြမ်းရောက်လျှက်ရှိနေသည်ဖြစ်၍
မျိုးဝင်းပိုင်၏ရှေ့ဖက်မှ နေ၍ သူ၏ခါးကိုဖက်ထားသော လွင်မာထက်၏လက်ဖျံလေးသည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ ပေါင်ရင်းကို အသာလေးဖိကပ်မိတော့ရာ သူ၏ပုဆိုးအောက်မှ ထောင်မတ်၍နေသော လီးတန်ကြီးကို သူမ၏လက်ဖျံလေးက အပေါ်မှ ဖိလျှက်သားလေးဖြစ်နေတော့သည်။
နှစ်ဦးသား နှုတ်ခမ်းခြင်းဂဟေဆက်ကာ အပြန်အလှန်နမ်းနေကြရင်းဖြင့် သူတို့နှစ်ဦး၏ ကိုယ်လုံးများမှာ တွန့်ကာ တွန့်ကာဖြင့် ဖြစ်လာကြတော့သည့်အလျှောက် မျိုးဝင်းပိုင်၏ပုဆိုးတွင်းမှ မာတောင်၍နေသော လီးတန်ကြီးပေါ်သို့ ထိကပ်၍နေသော လွင်မာထက်၏လက်ဖျံလေးမှာ လီးတန်ကြီးတစ်လျှောက် အရင်းမှ အဖျား အဖျားမှ အရင်းသို့ တစ်ချက်ခြင်း ပွတ်ကာ ပေးနေသလိုဖြစ်၍နေလေတော့သည်။
မကြာမီမှာပင် မျိုးဝင်းပိုင်၏လက်တဖက်က လွင်မာထက်၏ရင်သားမို့မို့ မောက်မောက်ပေါ်သို့ ကျရောက်၍လာသည်မှ သူမ၏နို့အုံကြီးကို ဝတ်ထားသော ဘော်လီအကျီင်္လေးပေါ်မှပင် ဖိညှစ်၍ ပေးလေတော့သည်။လွင်မာထက်ကလဲ သူမ၏ ရင်ဘတ်လေးကို ကော့၍ ကော့၍ပေးလာပါတော့သည်။
ခဏအကြာ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကွာအသွားတွင်တော့ လွင်မာထက်သည် မျိုးဝင်းပိုင်၏ မျက်နှာကို သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲယူလိုက်ပြီး ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို တရှိုက်မက်မက်ဖြင့် နမ်းလိုက်ပြီးနောက် ထိုင်နေရာမှအားယူကာ ထလိုက်ပြီး မပြေးရုံတမယ်ပင် အတွင်းခန်းထဲသို့ ဝင်၍သွားတော့ရာ ရုတ်တရက်ကြောင်၍ ကြည့်နေ သော မျိုးဝင်းပိုင်က ခဏနေမှထိုင်ရာမှထကာ လွင်မာထက်၏နောက်သို့ လိုက်၍ လာခဲ့လေသည်။
အခန်းတွင်းတွင် ကုတင်ပေါ်ရှိ အိပ်ယာကြီးပေါ်တွင်တော့ လွင်မာထက် တယောက် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ယာပေါ်တွင် မှောက်လျက်သားလှဲနေသည်။
နောက်မှရောက်၍လာသော မျိုးဝင်းပိုင်သည် ကုတင်ကြီးပေါ်သို့ တက်လိုက်ကာ
သူမ၏ဘေးတွင်ထိုင်လိုက်ပြီးခါးလေးကို လှမ်း၍ ဖက်ပြီး လွင်မာထက်၏တလုံးတခဲကြီး ဖြစ်၍နေသော တင်သားကြီးများကို ဝတ်ထားသော စကပ်လေးပေါ်မှပင် ဖိ၍ဖိ၍ အားပါးတရ နမ်းနေတော့သည်။ တစထက်တစ ကာမစိတ်များ သောင်းကျန်း၍လာရသော လွင်မာထက်သည်
သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို လူးကာလွန့်ကာ လုပ်နေရာမှ ပက်လက်
လှန်လိုက်ပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် သူမ၏လက်တဖက်က မျိုးဝင်းပိုင်၏အကျီင်္ ပေါ်သို့ လှမ်းလိုက်ကာ ကြယ်သီးလေးများကို ဖြုတ်၍ပေးပါတော့သည်။အလားတူပင် မျိုးဝင်းပိုင်၏လက်လေးတွေကလဲ သူမ၏အကျီင်္ကြယ်သီးလေးများကို ဖြုတ်၍ ပေးနေသည်။
လွင်မာထက်၏လက်လေးတစ်ဖက်က သူမ၏နောက်ကျောသို့ သွင်းလိုက်ရာက
ဘရာစီယာချိတ်လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီး သူမကိုယ်တိုင်ပင် ဘရာစီယာလေးကို သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ခွာ၍ပေးရင်းမျက်လုံးလေးများကို မှိတ်၍ ချလိုက်ပါတော့သည်။
ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား နို့နှစ်လုံးကို ခေတ္တမျှငေးစိုက်ကာကြည့်နေပြီးမှ မျိုးဝင်းပိုင်သည် သူမ၏အပေါ်သို့မှောက်၍ ချလိုက်ပြီး အငမ်းမရပင် နို့နှစ်လုံးကို တလှည့်စီစို့၍ပေးနေတော့ရာ လွင်မာထက်သည် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေး တွန့်တွန့် လွန့်ဖြစ်နေရာမှ သူမ၏နို့များကို မျိုးဝင်းပိုင်ထံသို့ ကျောလေးကော့ကာ ကော့ကာဖြင့် ဖိသွင်းပေးနေပါတော့သည်။
ထိုအခိုက်မှာပင် မျိုးဝင်းပိုင်၏လက်တဖက်က သူမ၏ခါးမှ စကပ်လေးကို
လှမ်း၍ဖြုတ်လိုက်သဖြင့် သူမ၏ပေါင်လေးနှစ်လုံးကိုထောင်၍ စကပ်လေးကိုချွတ်၍ပေးလိုက်တော့ရာ မျိုးဝင်းပိုင်၏လက်ကလဲ ချက်ခြင်းဆိုသလိုပင် လွင်မာထက်၏စောက်ပတ်ပေါ်သို့စောက်မွှေးလေးတွေကြားမှ တိုးဝင်ဖိကပ်သွားခဲ့ပြီး သူမ၏ စောက်ပတ်နူးနှုးအိအိလေးကို သူ၏လက်ဖြင့် ဖိ၍ ဖိ၍ ပွတ်ပေးနေတော့သည်။ လွင်မာထက်ခမျာမှာတော့ သူမ၏ဒူးလေးတွေကွေးကာ ထောင်လိုက် မိသော
ပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို စုလိုက်ကားလိုက်ဖြင့် ဖြစ်လျှက် ခံရခက်နေကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝမှာတော့ စောက်ရည်လေးများမှာ ရွှဲနစ်၍ နေခဲ့ရချေပြီဖြစ်သည်။ ခဏအကြာတွင်တော့
လွင်မာထက်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ သွေးသားများသည် ဆူပွက်၍လာခဲ့ရကာ သူမ၏စောက်ခေါင်းထဲမှလဲ ယား၍ ယား၍တက်လာရပြီး လွင်မာထက်မှာအလိုးခံချင်စိတ်တွေ မွှန်ထူ၍ လာခဲ့ရလေသည်။ “မောင်လေးရယ်….အင့်…ဟင့်….မ…မ….မနေတတ်တော့ဘူး…ဟင့်..”
လွင်မာထက်၏မပီမသစကားသံလေးကို ကြားလိုက်ရပြီးနောက်တွင်တော့ မျိုးဝင်းပိုင်သည် သူ၏ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ လွင်မာထက်၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်လေတော့သည်။ မျိုးဝင်းပိုင်တယောက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည် ဆိုသည်နှင့် သူမ၏မျက်လုံးလေးများသည် မှေးစင်း၍ထားရာမှပင် အသာလေးဖွင့်၍ ကြည့်လိုက်မိရာ ကာမဇောတွေကြားမှပင် ရင်လေးမှာ ဖို၍သွားရပြန်ပါသည်။
တောင်မတ်၍ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသောလီးတန်ကြီးမှာ အရှည်(၇) လက်မနီးပါးနှင့် လုံးပတ်က ကျပ်လုံးသာသာလောက်ရှိသည်။ပြီးတော့ အပြိုင်းပြိုင်းထ နေသော အကြောကြီးများကလဲ ဖုထစ်၍နေကြသည်။
မျိုးဝင်းပိုင်သည် လွင်မာထက်၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဝင်၍ထိုင်လိုက်ပြီး
သည်နှင့်လီးတန်ကြီးထိပ်ကိုစောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ကာ ဖိ၍သွင်းလိုက်လေတော့သည်။ “……ဗြိ….အင့်….ဗျစ်….အမေ့….ဗြိ….အာ့..ကျွတ်…..ကျွတ်…..အ….”
လီးတန်ကြီးမှာ လွင်မာထက်၏စောက်ပတ်ထဲသို့တဆုံးဝင်၍ သွားပြီဆိုသည် နှင့် မာကျောလှသော လီးတန်ကြီးနှင့်ပြည့်သိပ်ထိတွေ့ကာနေသော သူမ၏စောက်ပတ် အတွင်းသားလေးများသည် လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကာ လာရတော့သည်။
လွင်မာထက်တစ်ယောက် နာ၍သွားပုံရသဖြင့် မျိုးဝင်းပိုင်သည် စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဝင်၍နေပြီဖြစ်သော သူ၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ၌ ဖိကပ်၍ထားကာ အနားပေးလိုက်ရာ ခဏအတွင်းမှာပင် လွင်မာထက်၏ခါးလေးသည် ကော့၍ တက်လာတော့သည်။
သူမ၏ရမ္မက်သံလေးသည် မျိုးဝင်းပိုင်ကို စ၍တာလွှတ်လိုက်လေသည်။ သူသည် စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲ၍ထုတ်ကာ လိုးပါတော့သည်။
လွင်မာထက်သည် သူမ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများကို မျိုးဝင်းပိုင်၏
ဆောင့်ချက်များနှင့်အညီ မြှောက်ကြွ၍ပေးကာ သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကိုကော့၍ ကော့၍ ပေးရင်း အလိုးခံနေသည်။
အလိုးခံရင်း ညီးတွားရသည်မှာ အားရကြေနပ်ဖွယ် အရသာတွေ့နေရသော လွင်မာထက်သည်
သူမ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ မျိုးဝင်းပိုင်၏လီးတန်ကြီးက ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးလိုက်လေတိုင်း သူမ၏နှုတ်ခမ်းဖျားလေးများမှာ ဟ၍ ဟ၍ သွားကာ ဝမ်းခေါင်းသံလေးများဖြင့် ညီးတွားရင်း အားပါးတရအလိုးခံနေပါတော့သည်။
“ …….ဗြွတ်….အင်း….ပလွတ်…ပလွတ်….ဖွတ်….ဟင်းဟင်း….ပြွတ်…ဖွတ်… ဟင်း.. …….အင်း….ဟင်း…..အင်း…..”
အစက လွင်မာထက်သည် သူမက ဦးဆောင်ရလိမ့်မည်ဟု ထင်၍ထားသော မျိုးဝင်းပိုင်သည် သူမကိုမျက်လုံးမဖွင့်နိုင်အောင်ကောင်း၍နေရန်ပင် လိုးပေးနေနိုင်သည့် အတွက် အကြေနပ်ကြီး ကြေနပ်၍နေရတော့သည်။
ရှည်လျှားလှသော လီးတန်ကြီးမှာ သူမ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ ဝင်လာလေတိုင်း လီးတန်ကြီး၏ထိပ်ဖူးကြီးမှာ သူမ၏သားအိမ်ဝသို့ ပြေး၍ ပြေး၍ ဆောင့်နေသဖြင့် လွင်မာထက်၏ကိုယ်လုံးလေးသည် တုံ၍ တုံ၍သွားရအောင် ပင် ကောင်း၍နေရလေသည်။ “…..မမထက်…..ကောင်းလား…ဟင်….”
“…….အမလေး…….အင်း…..ဟင်း…..ချစ်….ချစ်လိုက်တာ မောင်လေးရယ်….အင်း.. ဟင်း……” ကာမအရသာများ အဆမတန် တက်၍လာရသော လွင်မာထက်က သူမ၏
စောက်ပတ်ထဲသို့ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးပေးနေသော မျိုးဝင်းပိုင်၏လီးတန်ကြီးကို သူမ၏စောက်ပတ် အတွင်းသားနုနုလေးများဖြင့် ဖိ၍ ဖိ၍ ဖင်ကြားလေးများ ရှုံ့၍ ရှုံ၍ သွားရသည်အထိ ညှစ်၍ပေးရင်း အလိုးခံနေသည်။
မကြာမှီမှာပင် လွင်မာထက်တစ်ယောက် တဟင်းဟင်းဖြင့် ဆက်တိုက်
ညီးတွားကာ ကော့ပျံလာသလို ကာမဆိပ်များတက်၍ လာခဲ့ရပြီဖြစ်သော မျိုးဝင်းပိုင်သည်လဲ သူ၏လီးတန်ကြီးမှာ ကျင်ဆိမ့်၍လာပြီဖြစ်ရာ လွင်မာထက်၏ နို့နှစ်လုံးကို လှမ်း၍ဆွဲကာ ဆုတ်နယ်ဖျစ်ညှစ်ရင်း အားကုန်ဆောင့်၍ အချက်(၂၀)မျှ လိုးလိုက်ပါတော့သည်။ “……အမလေး….မောင်…..အား….ချစ်….တယ်……ဟင်း….ဟင်း…..”
မျိုးဝင်းပိုင်နှင့် လွင်မာထက်တို့ ကိုယ်လုံးနှစ်ခုသည် တွန့်ခါ၍သွားကြရကာ နှစ်ဦးစလုံး ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်၍ သွားရပါတော့သည်။
မျိုးဝင်းပိုင်နှင့်လွင်မာထက်တို့သည် ထိုနောက်ပိုင်းတွင်တော့ ညနေရုံးဆင်းတိုင်း နေ့တိုင်းလိုလိုပင် တွေ့နေကျနေရာလေးသို့ သွားကာ တူနှစ်ကိုယ် ယှဉ်တွဲ၍ ချစ်ပွဲဝင် ခဲ့ကြသည်မှာ (၁၀)ရက်ထက် မနည်းတော့ပေ။
လွင်မာထက်ကလဲ မျိုးဝင်းပိုင်ကို တပ်မက်စွဲလန်းကာ နေရသကဲ့သို့ မျိုးဝင်းပိုင်ကလဲ လွင်မာထက်ကို မက်မောစွဲလန်းကာ ရှိနေခဲ့ရလေ တော့သည်။ထန်းပင်မှ ထန်းနို့များသည် လှီးဖြစ်စရှိလျှင် လှီးလေထန်းနို့ထွက်လေပင် ဖြစ်သည်။မလှီးမဖြတ်ဘဲထားပါက တဖြေးဖြေးခြောက်၍ ကြွေတတ်ပေသည်။ ထို့ပြင် စားရသောကလေးသည် ငတ်သည်ဟူသော ဆိုရိုးစကားကလဲ ရှိနေပြန်သေးသည်။
တစ်ခါဘူးကမှမခံစားဘူးခဲ့ရကာ ကာမအရသာကို စတင်ခံစားဘူး ခဲ့သည်နေ့မှစ၍
နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို လွင်မာထက်သည် (၁၀)ရက်တိုင်တိုင် နေ့စဉ် ရက်ဆက်ဆိုသလို အားပါးတရခံစားခဲ့ရလေသည်။
ပြီးတော့ မျိုးဝင်းပိုင်ကလည်း ခွင့်(၁၀)ရက်ယူသွားတော့ လွင်မာထက်သည်
ဆန့်တငန့်ငန့်ဖြစ်၍ ကျန်ခဲ့သည်။ချိုသည် ခါးသည်ဆိုသော အရသာကိုလည်း သိနေတော့ ပထမတွင် အချိန်တန်လျှင် သတိရသည်။အဲဒီနောက် တဖြေးဖြေး တရက်ပြီးတရက်ဖြစ်လာတော့ မကြာခဏဆိုသလို ပြင်းပြသော ဆန္ဒတွေက သွေးသားတို့ကို သောင်းကျန်းစေသည်။ဒါပေမဲ့လည်း (၁ဝ)ရက်ပြည့်လျှင် တော့ မျိုးဝင်းပိုင်ပြန်၍လာတော့မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ဖြေသိမ့်ကာ သူမ၏
ဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်၍ ခံစားခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သူမ၏ဆန္ဒမှာ ပြည့်ဝ၍မလာခဲ့ပါ။(၁၀)ရက်ပြည့် သောနေ့မှာပင်
မျိုးဝင်းပိုင်၏ဖခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သဖြင့် နောက်ထပ်ခွင့် (၁၅)ရက်ပေး ရန် ခွင့်ယူခဲ့သည်ကို သူမသည် သိခဲ့ရပြီး ကိုယ်စိတ်နှလုံး ချုံးချုံးကျကာ စိတ်ပျက်၍ သွားခဲ့ရသည်။
လွင်မာထက်တစ်ယောက် ခံစားနေရသော ဝေဒနာမှာ ကိုယ်နှင့်မမျှ
ရင်နှင့်မမျှအောင်ဖြစ်၍နေသည်။အလုပ်လုပ်ရတာပင်သိပ်ပြီး စိတ်မပါတော့။အလုပ် ကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်အိုအို ယောကျာ်းတစ်ယောက်ယောက် နှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနေရချိန်မှာပင် သူမ၏သွေးသားတို့က တမျိုးတမည်ဖြစ်ကာ လွင်မာထက်၏ အတွင်းစိတ်တို့သည် ဖေါက်ပြန်၍ နေရသည်။ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ခင်ခင်မိသည် အမဖြစ်သူ ဒေါ်သိန်းလွင်၏သြဇာကို မလွန်ဆန်နိုင်၍သာ အမဖြစ်သူ တရားစခန်းဝင်နေစဉ်တွင် လွင်မာထက်နှင့်အတူလာ၍ နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမ၏သြဇာကို မလွန်ဆန်နိုင်သည်ကလည်း မပြောနှင့် ခင်ခင်မိတို့
လင်မယားနှစ်ယောက်အတွက် စားဝတ်နေရေးကို အမဖြစ်သူ ဒေါ်သိန်းလွင်က တာဝန်ယူထားခဲ့သည်။ထို့ပြင် တခါတရံလိုအပ်သည့်အခါများတွင်လည်း ငွေကို လိုသလောက် ထုတ်ပေးသေးသည်။ဒီတော့ အမစကားကို မနာခံ၍ မဖြစ်သဖြင့် နာခံခဲ့ရသည်။
သို့ပေမဲ့လည်း ခင်ခင်မိသည် ပြောရမည်ဆိုလျှင် ယောကျာ်းနှင့်ကင်းကွာ ကာ နေနိုင်သူ နေတတ်သူမဟုတ်ချေ။အခုဆိုလျှင် ယောကျာ်းနှင့်မတွေ့ရသည်မှာ (၁၈) ရက်ခန့်ပင် ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။မနေ့က လွင်မာထက် ရုံးသွားနေတုံး ခင်ခင်မိသည် အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့သေးသည်။ဒါပေမဲ့ ကျောက်ပွဲစားလုပ်သော သူမ၏ယောကျာ်းက ခရီးထွက်သွား သည်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်ခန်းမှ ပြောသဖြင့် သိခဲ့ရသည်။ ခင်ခင်မိ၏ယောကျာ်း သည်လည်း ခင်ခင်မိမရှိလျှင်အပျော်ရှာနေမယ်ဆိုတာကို ခင်ခင်မိတယောက် သိပြီး သား ဖြစ်သည်။
နဂိုထဲကမှတဏှာရာဂတွေကြီးခဲ့သော ခင်ခင်မိတယောက် ယခုလို ယောက်ျားနှင့် မတွေ့ရပြန်တော့ သူမ၏သွေးသားတွေက အပြင်းအထန်ပင် သောင်းကျန်း၍ နေခဲ့ရသည်။
နံနက်စာစားပြီး၍ အိပ်ယာထက်တွင်တက်၍လှဲနေမိရင်း မပြည့်ဝသော ဆန္ဒတွေအတွက် ရတက်မအေးနိုင်အောင် ဖြစ်၍နေရသော ခင်ခင်မိသည် သူမ၏ ယောကျာ်းကိုတွေးလိုက်မိပြီး သူလည်း
အပျော်ရှာနေမှာဘဲဆိုသော အတွေးက ဝင်လာပြန်တော့ ခင်ခင်မိ၏ရမ္မက်သွေးတို့သည် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဖြစ်ရလောက် အောင်ပင် ထကြွ၍ သောင်းကျန်းလာခဲ့ရသည့်အလျှောက် ခင်ခင်မိသည် အိပ်ယာပေါ် တွင် လှဲ၍မနေနိုင်တော့ဘဲ လူးလဲ၍ထကာ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်၍ လာခဲ့လေသည်။
“ မမ “
ခင်ခင်မိသည် နောက်မှခေါ်သံကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မသိန်းနုကို တွေ့ရသည်။ဒါနဲ့ဘဲ ခင်ခင်မိက သူမ၏ခြေလှမ်းတွေကို့ရပ်လိုက်သည်။
“…ဟို ကျမ…တာမွေမှာရှိတဲ့ ကျမညီမဆီခဏ သွားချင်လို့ပါ မမ…”
“…ညနေ မစောင်းမှီ ပြန်ခဲ့ပါ့မယ်…..မမ…ခိုင်းစရာရှိရင် ခိုင်းလို့ရအောင် ကိုတင်အောင် ကို ထားခဲ့တယ် မမ…”
“……အိမ်မှာပါ မမ…..” “…အော် အေးအေး ရတယ် သွားရင်သွားတော့လေ…”
ကိုတင်မောင်နှင် မသိန်းနုတို့က တိုက်ကြီး၏နောက်ဖက်နားတွင်ရှိသော သစ်သားအိမ်လေးတွင် နေထိုင်ကြသည်။အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား ပုံစံမျိုးဖြစ်၍ သာ အသက်(၃၃)နှစ်သာရှိသေးသော ခင်ခင်မိကို မသိန်းနုက မမ ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တော့ မသိန်းနုက အသက်(၃၅)နှစ်ပင် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကိုတင်မောင်က အသက် (၃၈)နှစ်ပင်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ မသိန်းနုက အိမ်ဗာရီယလုပ်ငန်းများကို လုပ်ရ၍ ကိုတင်မောင်က သစ်ပင်ပန်းပင်များ စိုက်ပျိုးရန် ခြံရှင်း၊မြက်ရှင်းရန် တခါတရံ လိုအပ်ပါက ကားမောင်းပေးရသည့် အလုပ်များကို လုပ်ရလေသည်။
မသိန်းနုက အိမ်နောက်ဖက်သို့ပြန်၍ထွက်သွားချိန်မှာပင် ခင်ခင်မိသည်ဧည့်ခန်းထဲသို့ ဆက်၍ထွက်ခဲ့သည်။ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ ဗွီစီဒီ ကြည့်ရန်စိတ်ကူးလိုက်သေးသည်။ဒါပေမဲ့လဲ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်၍နေသော သူမသည် ဗွီစီဒီကြည့်ရန် လုပ်ပြီးကာမှ လက်ထဲမှ ဗွီစီဒီချပ်ကိုချကာ စားပွဲပေါ်တွင် တွေ့ရသော သတင်းစာကိုကောက်၍ ကိုင်လိုက်ပြန်သည်။
ထိုအချိန်မှာပင် မသိန်းနုတယောက် အိမ်ဘေးမှပတ်၍ အိမ်ရှေ့ဖက်သို့
ထွက်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရကာ ခင်ခင်မိ၏စိတ်ထဲတွင် မည်သို့ တွေးလိုက်မိသည်မသိ။လက်ထဲမှ သတင်းစာကို စားပွဲပေါ်သို့ ချကာထိုင်ရာမှ ထလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူမသည် အိမ်နောက်ဖက်သို့ ဦးတည်၍ ထွက်ခဲ့လေတော့သည်။
ခင်ခင်မိသည် မီးဖိုဆောင်ဘေးပေါက်မှနေ၍ ခြံထဲသို့ဆင်းလိုက်သည်။
တိုက်ကြီး၏နောက်ဖက်ရှိ မသိန်းနုတို့နေထိုင်ရာ အိမ်လေးဆီသို့ လာခဲ့တော့ရာတွင် တိုက်ကြီး၏နောက်ဖက်သို့ကွေ့၍ အဝင်မှာပင်မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် ခင်ခင်မိ၏ခြေလှမ်းတို့သည် ရပ်တန့်၍သွားရသည်။ပြီးတော့ ရှေ့နားတွင်ရှိသော ပန်းခြုံဘေးသို့ သူမသည် ပြေး၍ကပ်ကာ ထိုမြင်ကွင်းကို
သူမမြင်တွေ့လိုက်ရသည်ကတော့ မသိန်းနုတို့၏အိမ်လေးဘေးတွင် မသိန်းနု၏ယောက်ျားကိုတင်မောင်သည် ရေစည်ထဲမှရေကို ခပ်၍ချိုးနေလေသည်။
သူ၏တကိုယ်လုံးတွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်ကိုသာ ဝတ်ထားသည်။
တကိုယ်လုံးစိုရွှဲနေသော ကိုတင်မောင်၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားရှိ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးသည် ဖေါင်းဖု၍လုံးတစ်ကာ အမြောင်းလိုက်ကြီး ဖြစ်နေလေသည်။ ခင်ခင်မိ၏အကြည့်တွေက ထိုနေရာမှ မခွာနိုင်အောင်ဖြစ်၍ သွားရလေသည်။
ပြီးတော့ တကိုယ်လုံးရေတွေစိုရွှဲနေသော ကိုတင်မောင်၏ကိုယ်လုံးကြီး သည်
ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းထ၍နေသည်။ပေါင်တံကြီးနှစ်ဖက်မှာလည်း သန်မာ လိုက်သည် ဖြစ်ခြင်း တုတ်ခိုင်၍ အသားစိုင်ကြီးတွေမှာ အမြှောင်းလိုက် ထနေရသည်။
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းကပင် ခင်ခင်မိ၏တကိုယ်လုံးသည် ရှိန်းရှိန်းဖိန်းဖိန်း ဖြစ်၍လာရသည်။ ပြီးတော့လဲ သူမသည် မကြာခဏဆိုသလိုပင် တံတွေးကို မျို၍ ချနေ ရလေတော့သည်။ ကိုတင်မောင်တစ်ယောက် ရေချိုး၍ပြီးချေတော့မည်။ခင်ခင်မိသည် ပန်းရုံအကွယ်မှ ထွက်လိုက်ပြီး ကိုတင်မောင်ရှိရာသို့ သူမသည် ခြေလှမ်းလိုက်သည်။ “…ကိုတင်မောင်….” “….ဗျာ…” “….အမလေး..” “…ဟင်….” “….အို…”
ကိုတင်မောင်ကို လှမ်း၍ခေါ်လိုက်ရာမှ ခြေလှမ်းလိုက်သော ခင်ခင်မိတယောက် ကိုတင်မောင်က သူမ၏ထံသို့ လှည့်အကြည့်မှာပင် ရေစိုထားသော အုပ်ခဲပေါ်သို့ လှမ်း၍ နင်းလိုက်မိသော ခင်ခင်မိ တစ်ယောက် အုပ်ခဲစောင်းကို နင်းမိရာက ချော၍ သွားကာ လဲကျမတတ်ဖြစ်၍သွားရသည်။ဒီမှာတင် လက်တကမ်းအကွာမှ ကိုတင်မောင် က ဖြတ်ကနဲ ရှေ့သို့လှမ်း၍ ခြေတလှမ်းတက်ကာ ခင်ခင်မိ၏ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်း၍ ထိန်းကာဖက်လိုက်မိသည်။ဖက်တာမှ ခင်ခင်မိလဲ၍ ကျမသွားရလေအောင်ပင် အတင်း ဖက်လိုက်သည်။အို ကနဲဖြစ်သွားသော်လည်း ခင်ခင်မိသည်တဒင်္ဂတော့ ကိုတင်မောင်၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် မှေး၍နေမိသည်။ခင်ခင်မိ၏ စိတ်ထဲတွင် တဒင်္ဂကြေနပ်၍ သွားရလေသည်။
သူမ၏ခါးစောင်းနှင့်ထိမိနေသော ကိုတင်မောင်၏ရှေ့မှ လုံးတစ်ဖုထစ်၍ သူမကို ထိနေသည်။ တဒင်္ဂနေပြီးတော့မှခင်ခင်မိသည် ကိုတင်မောင်၏ရင်ခွင်ထဲမှ ထွက်လိုက်လေသည်။ပြီးတော့မှ သူမသည်အသက်ကို မှန်မှန်ရှု၍……….
“….ကို…ကိုတင်မောင်…ထမင်းစားပြီးရင် အိမ်ဖက်ကို ခဏလာခဲ့အုံးနော်..”
ပြောရင်းက ကြည့်မိလိုက်တော့ ကိုတင်မောင်၏ရေများစိုရွှဲနေသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး၏အထဲမှ စောစောက ရှေမျှောမျှောအရာကြီးသည် ရှေ့သို့ပင် ငေါ၍ထွက်နေပေပြီ။ ခင်ခင်မိက ခပ်ရဲရဲပင် ကြည့်နေသည်ကို ကိုတင်မောင်ကလဲ သတိပြုလိုက်မိသည်။
လို့ ဆိုကာလှဲ့ထွက်သွားသော ခင်ခင်မိ၏လက်ဖျားလေးက ကိုတင်မောင်၏ရှေ့မှ
ခပ်ငေါငေါထွက်နေသည့်အရာကြီး၏ထိပ်ဖျားကို မထိတထိ ခလုတ်တိုက်၍ထိသွားရာ ကိုတင်မောင်၏ကိုယ်ကြီးသည် တွန့်ကနဲဖြစ်သွားရာမှပင် သူ့ကိုကျောပေး၍ ထွက်သွားသော
ခင်ခင်မိ၏နောက်ကျောကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်နေလိုက်မိသည်။
တလုံးစီ တလုံးစီ လှုပ်ကနဲ လှုပ်ကနဲဖြစ်၍သွားရသော ခင်ခင်မိ၏ တင်သားစိုင်ကြီးများမှာ ကိုတင်မောင်ဝတ်ထားသော ရေစိုအတွင်းခံဘောင်းဘီလေး၏ အတွင်းမှ လီးတန်ကြီးကို အဆမတန် တောင်မတ်လာစေတော့သဖြင့် ဘောင်းဘီလေး ကြောင့် တင်းကြပ်၍လာရသော
ကိုတင်မောင်သည်အနားတွင်ရှိနေသော တန်းမှ ရေလဲ ပုဆိုးကို ကမန်းကတန်းလှမ်း၍ ယူလိုက်ရလေသည်။ ခင်ခင်မိတယောက်ကတော့ သူ၏မြင်ကွင်းထဲမှ ပျောက်ကွယ်သွားသော် လည်း
သူမ၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှသော ကိုယ်လုံးလေးကတော့ သူ၏အမြင်အာရုံထဲမှ မထွက်နိုင်ပါချေ။ ထမင်းကို ကမန်းကတန်းစား၍ တိုက်ကြီးထဲသို့ရောက်၍လာသော ကိုတင်မောင်သည် မီးဖိုဆောင်ထဲတွင် မည်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရ၍ အိမ်အတွင်းဖက်သို့ ဆက်၍ ဝင်လာခဲ့သည်။ ကိုတင်မောင်တယောက် ခင်ခင်မိ၏အိပ်ခန်းရှေ့သို့ ဖြတ်၍အလျှောက်တွင်
အိပ်ခန်းထဲမှ ထဘီရင်လျှားလေးဖြင့် လှမ်း၍ထွက်လာသော ခင်ခင်မိနှင့် လူလုံးချင်း တိုက်မိကြတော့သည်။ ဒီလို ဖြစ်အောင်လဲ ခင်ခင်မိက ကြိုတင်၍ စီစဉ်ကာ တမင်ဝင် တိုက်မိအောင် လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စကတော့………………
လူလုံးချင်းဝင်တိုက်မိသည်နှင့် လျှင်မြန်သော ကိုတင်မောင်က လက်တဖက်ဖြင့်
ခင်ခင်မိ၏ခါးကိုသိုင်းဖက်၍ ဆွဲယူကာ အထိန်းလိုက်သည်တွင် သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ရင်လျှားထားသော ထဘီလေးသည် သူမ၏ရင်ညွန့်ထက်မှ ပြေကာလျှော၍ ကျသွားရာ သူမ၏ခါးကို ခပ်တင်းတင်းလေးဆွဲ၍ ဖက်ထားသော ကိုတင်မောင်၏လက်ဆီသို့ အရောက်တွင် တန့်ကနဲ ရပ်၍သွားချိန်မှာပင် ခင်ခင်မိတစ်ယောက် အံ့သြတကြီး တွန့်ကနဲ ဖြစ်၍ သွားရစဉ်မှာပင် သူမ၏ခါးမှ တင်မောင်၏လက်ကလဲ ယောင်ယမ်း၍ အခွာလိုက်တွင်တော့ ခင်ခင်မိ၏ထဘီလေးမှာ သူမ၏ခြေဖျားဆီသို့ လျှောကနဲ ကျ၍ ကျသွားလေတော့သည်။
အခိုက်အတန့်လေးမှာပင် ဝင်းလက်စွာ ထွက်ပေါ်၍ လာရသော ခင်ခင်မိ၏
ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို မြင်လိုက်ရစဉ်မှာပင် ခင်မောင်၏လက်ကဖြတ်ကနဲပင် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲ၍ ဖက်လိုက်ပြီး ခင်ခင်မိ၏ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ကို ရွှတ်ကနဲ နေအောင် နမ်းလိုက်ရာမှ ခင်ခင်မိ၏နှုတ်ခမ်းများ အပေါ်သို့ တင်မောင်၏နှုတ်ခမ်းများက စုပ်နမ်းလိုက်ပါလေတော့သည်။
ပြီးတော့လဲ တင်မောင်၏လက်တွေက ခင်ခင်မိ၏ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးကို ဖက်ထားရာမှ အငြိမ်မနေဘဲ သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးပေါ်တွင် ရွှေ့လျား ပြေးလွှားနေသည့်အပြင် ဖြူဖွေးနေသော သူမ၏တင်သားစိုင်ကြီးတွေကိုလည်း မချင့်မရဲနှင့် ဆုတ်နယ်ဖျစ်ညှစ်၍နေရင်းကပင် တဖြေးဖြေး ခင်ခင်မိ၏ကိုယ်လုံးလေး အား တင်မောင်သည် အိပ်ခန်းထဲသို့ တဖြေးဖြေးဆွဲ၍ သွင်းသွားလေတော့သည်။
အိပ်ခန်းဝနှင့်လေးငါးပေမျှသာဝေးသော ကုတင်စောင်းသို့ချဉ်းကပ်မိလိုက်သည် ဆိုလျှင်ဖြင့် တင်မောင်သည် သူ၏နှုတ်ခမ်းများကို ခင်ခင်မိ၏နှုတ်ခမ်းလေးတွေပေါ်မှ ဆွဲ၍ ခွာယူလိုက်သည်။
ထို့နောက် ခင်ခင်မိ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်စောင်းမှ ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်ကာ ချလိုက်ရင်း တင်မောင်၏ကိုယ်လုံးကြီးသည်လည်း သူမ၏ကိုယ်လုံး လေးပေါ်မှ ကပ်၍ပါသွားသည်။ပြီးတော့ တင်မောင်သည် သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို အငမ်းမရပင် ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့၍ ပေးရင်းက နို့သီးလေးတွေကိုပါ လျှာဖြင့် လှည့်ပတ်၍ ယက်နေတော့ရာ………………..
တလွန့်လွန့်ဖြစ်၍နေရသော ခင်ခင်မိသည် သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ ကုတင်စောင်းကြမ်းပြင်တွင် ရပ်၍နေသော တင်မောင်၏ကိုယ်လုံးကြီးကို သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးဖြင့် အတင်းပင်
ထိုအချိန်မှာပင် ခင်ခင်မိ၏နို့နှစ်လုံးကို အားရပါးရ စို့၍ပေးနေသော တင်မောင်၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ဖင်သားကြီးတွေကို အောက်သို့ သွင်းကာ ဖင်သားကြီးများကို ထိုးသွင်း၍ ဆုတ်နယ်ပေးနေရုံမျှမက သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ် သို့ ဖိ၍ထားသော သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကိုလည်း လက်သွင်းနိုင်ရုံကြွလိုက်ရာမှ လက်ကို ထိုးသွင်းကာ ခင်ခင်မိ၏စောက်ပတ်ကြီးကို အုပ်၍ ကိုင်လိုက်လေတော့သည်။
တင်မောင်၏ လက်ဖဝါးဖြင့်ပင် အပြည့်ဖြစ်၍နေသော ခင်ခင်မိ၏စောက်ပတ် ကြီးသည် အမွှေးများ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြင့် ဖေါင်းအိနေသည်။အိထွေးသော အတွေ့ကြောင့်ပင် တင်မောင်သည် သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးကို ညှစ်၍ ကိုင်လိုက်မိသည် မှစ၍ အောက်သို့လျှော၍ပွတ်လိုက်ရာ ခင်ခင်မိ၏စောက်ပတ်ဝတွင် စိုရွှဲ၍နေသော အရည်လေးများက သူ၏လက်ကိုလာ၍ ထိတွေ့သည်။ခင်ခင်မိ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို လေးငါးကြိမ်မျှ ပွတ်၍ ပေးလိုက်ပြီးသည်နှင့် ရမ္မက်စိတ်များပြင်းပြ၍လာရသော တင်မောင်သည် သူ၏မျက်နှာကို ခင်ခင်မိ၏ရင်ဘတ်ပေါ်မှ ခွာကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ရာ မှေးစင်းထားသော ခင်ခင်မိ၏မျက်လုံးလေးများမှာ ဖွင့်၍လာလေသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ တင်မောင်သည် သူ၏ကိုယ်ပေါ်မှ စွပ်ကျယ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ပြီးမှ ပုဆိုးကိုပါ ချွတ်၍ချလိုက်တော့ရာ ကြည့်နေသော ခင်ခင်မိ၏
စောက်ပတ်ကြီးသည်ပင် တင်းကနဲဖြစ်၍ သွားရလေသည်။တွေ့မြင်လိုက်ရသော တင်မောင်၏လီးတန်ကြီးမှာ အရှည် (၈)လက်မကျော်ကျော်လောက်နှင့် လုံးပတ်က ငါးမတ်လုံးမျှပင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ လီးတန်ကြီး၏ဒစ်ကြီးမှာ ပြဲလန်၍နေပြီး နီရဲနေသော ထိပ်ဖူးကြီးက ထိပ်တွင်အရည်တွေစိမ့်ထွက်ကာ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေသည်။
ပြီးတော့ တင်မောင်၏လက်ညှိုးထိပ်က သူမ၏စောက်ခေါင်းနံရံလေး တွေကို
ကလိ၍နေပြန်တော့ စောက်ရည်ကြည်လေးတွေ ရွှဲကနဲ ရွှဲကနဲထွက်ရင်းကပင် ခင်ခင်မိ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများသည် ကုတင်စောင်းမှ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ တက်၍ လာရလေသည်။
ကာမဆိပ်တွေ အဆမတန်တက်နေရသော ခင်ခင်မိမှာမျက်နှာလေး ခပ်ရှုံ့ရှုံ့လေးဖြစ်လျှက် အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုပင် ကိုက်၍ထားရလေသည်။ ဒါပေမဲ့ သူမသည် တာရှည်တော့ တင်းမခံနိုင်ပါ။ “……ကို….ကိုတင်….တော်ပါတော့….ကျမအသဲက ယားလှပြီ လိုး…လိုးမှာဖြင့်… လိုးပါတော့ မနေနိုင်တော့ဘူး……ဟင်း…ဟင်း….”
ဒီကြားထဲမှပင် တင်မောင်သည် သူ၏လက်ညှိုးကိုစောက်ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်းက
စောက်စေ့လေးကို (၂)ချက် (၃)ချက် ကလိလိုက်ပေသည်။
ပြီးတော့မှ တင်မောင်သည် သူ၏လီးတန်ကြီးထိပ်ကို စောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ကာ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။
“…….အင့်…..အမလေး… ဖြေးဖြေး…ရှင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီး.. ဟင်း..”
ခင်ခင်မိ၏မျက်နှာလေးတခုလုံး ရှုံ့မဲ့၍သွားကာ သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံး လေး တစ်ခုလုံးမှာ ကော့၍တက်သွားရလေသည်။
ထိုအချိန်မှာပင် ဆန္ဒစိတ်များ ပြင်းပြကာ ရုံးတွင်အလုပ်လုပ်၍ပင် မရနိုင် ဖြစ်နေရသဖြင့် အိမ်သို့ပြန်၍လာသော လွင်မာထက်၏ကားလေး အိမ်ရှေ့သို့ထိုးရပ် လိုက်သည်ကိုပင် ရမ္မက်ထန်နေကြသော တင်မောင်နှင့်ခင်ခင်မိတို့နှစ်ယောက် မသိ
လွင်မာထက်သည် ဧည့်ခန်းထဲမှ ဖြတ်၍ အပေါ်ထပ်သို့တက်ရန် လှေခါးထိပ်သို့ အသွားတိုက်ကြီး တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေသည့်ကြားက ဧည့်ခန်းနှင့် ကပ်ရက်အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်ပေါ်လာနေသော အသံလေးများကြောင့် သူမ၏ခြေလှမ်းမှာ ရပ်၍သွားသည်။ပြီးတော့ ဘာသံဆိုတာသိလိုက်ရသည်နှင့် လွင်မာထက်သည် သူမ၏ စလင်းဘက်အိတ်လေးကို အနီးရှိ စားပွဲပေါ်သို့လှမ်း၍ တင်လိုက်ရာက အသံလေးတွေ ထွက်ပေါ်နေရာ အိပ်ခန်းဝသို့ ခပ်သွက်သွက်လာကာ အိပ်ခန်းတံခါး ဘေးနံရံတွင် ကပ်၍ ဖွင့်ထားသော အိပ်ခန်းပေါက်သို့ သူမ၏ခေါင်းတခြမ်းကို ထုတ်ကာ ကြည့်လိုက်မိ ချိန်မှာတော့ လွင်မာထက်၏ရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲဖြစ်၍ သွားရချိန်မှာပင် စောစောကထဲ က သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ထကြွသောင်းကျန်းနေရသော သွေးသားတို့သည် ဖျန်းကနဲ ခါ၍သွားရလေသည်။
ခင်ခင်မိ၏စောက်ပတ်ကြီးထဲကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် လိုးနေသော
တင်မောင်၏ဧရာမလီးတန်ကြီးမှာ အရည်များပေပွလျှက် ပြောင်လက်ကာ မက်မောစရာကြီး ဖြစ်နေသလို လီးတန်ကြီးက အားပါးတရ ဆောင့်၍ လိုးလိုက်တိုင်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုမှာ ခွက်၍ ခွက်၍ ဝင်သွားနေသည်မှာ အားရစရာ ကောင်းလှပါသည်။
…….ဟင်း ဟင်း…. ကျမစောက်ပတ်ကြီး ကွဲသွားအောင် ဆောင့်ပစ်လိုက်စမ်း…ပါ .. ဟင်း…ဟင်း….” အရည်လဲ့ကာ တောက်ပြောင်နေသော လွင်မာထက်၏မျက်လုံးများက သူတို့ကို ကြည့်ရင်း သူမ၏ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားအားလုံးကို ချွတ်၍ ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ လွင်မာထက်သည် သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေးကို သူတို့ရှိရာသို့ သယ်ဆောင် သွားပြီး အဒေါ်ဖြစ်သူ ခင်ခင်မိ၏ ကိုယ်လုံးဘေး ကုတင်စောင်းတွင် ပက်လက်လှန်ချ လိုက်ရာက သူမ၏ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ကားပြီး ဖေါင်းကား၍ အရည်တွေ စိမ့်ထွက် နေပြီဖြစ်သော သူမ၏စောက်ပတ်ဝကို
စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ပေါ်၌ သူမ၏ လက်လေးနှစ်ဖက်မှ လက်မနှစ်ချောင်းဖြင့် တဖက်တချက်စီ တင်၍ဖြဲလိုက်ရာ နီရဲသော
စောက်ပတ်ဝရှိ အတွင်းသားလေးများပေါ်၍ လာချိန်တွင်တော့ တင်မောင်သည် ခင်ခင်မိ၏စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲ၍ ထုတ်လိုက်ရာက ဘေးသို့ လှည့်လိုက်ပြီး သူ၏အရည်တမျှားမျှားဖြင့် လီးတန်ကြီးကို
သူနေ့စဉ်တွေ့မြင်ကာ လိုးချင်နေရသည့် လွင်မာထက်၏ဖြဲထားသော စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးစိုက်ကာ လိုးလိုက်ချိန်တွင်တော့ လွင်မာထက်ခမျာ မျက်လုံးလေးများ စုံမှိတ်ကာ အံလေးကြိတ်ရင်း အသားလေးများ တဆတ်ဆတ် တုန်တက်သွားရပါလေတော့သည်။